Firefox 90 ichaburitsa Proton, mamwe madiki tweaks kune yayo interface | Linux Vakapindwa muropa
Ini pachangu, ini handisi kunyunyuta nezve dhizaini iyo Mozilla inoshandisa mubrowser yayo, asi chokwadi ndechekuti angangoita ese emazuva ano software anoshandisa chimwe chakasiyana. Kunyanya zvakanyanya, panenge pasina kana majee uye zvinenge zvese zvine mativi akakomberedzwa. Ndicho chimwe chinhu chiri kushanda naMozilla, uye chichava chinhu chaicho mumwedzi yakati wandei. Muchokwadi, chichava chimwe chezvinhu zvakatanhamara zvekuburitswa kunotevera neshanduko yekuverenga gumi, ndiko kuti, mu Firefox 90.
Saka zvataurwa Techdows, uko kune zvakatorwa zvishoma zvirinani pane zvangu, pamwe nekuti kwandiri muManjaro uye nemamwe ma tweaks muXfce yake, mamwe emabasa akavimbiswa haaratidzike. Iyo dhizaini dhizaini ichauya pasi pseudonym ye Proton uye, kune iyo yambotaurwa shanduko ine yakapfava micheto, imwe ichawedzerwawo iyo inozoshandura nzira yekuratidza sarudzo dzatinowana kubva kumitsara mitatu inozivikanwa zvakare se «hamburger».
1 Firefox 90 iri kuuya muna Chivabvu
2 Maitiro ekuyedza iyo nyowani dhizaini
Firefox 90 iri kuuya muna Chivabvu
Shanduko inonyanya kuoneka uye imwe inokwezva kutarisisa inogona kuonekwa mumufananidzo unotungamira ino chinyorwa: lashes ichave yakatenderedzwa, chimwe chinhu chatinozoona kana tikasiya bhawa repamusoro kana kwete. Imwe shanduko yatinozoona zvakanyanya ndiyo inoratidzwa kana tasvika hamburger: menyu inodzika-pasi uye pakutanga ichangoratidza izvo zvatinoshandisa zvakanyanya. Izvi ndizvo zvandisina kukwanisa kuongorora mumayedzo angu, nekuda kwekuti hazviratike saizvozvo. Hatifanire kukanganwa kuti zvese zviri muchikamu chekuyedza.
Iyo Firefox 90 Proton inoshandura iyo UI seinotevera:
Tab bar (semusoro wekubata).
Mozilla yakagadzirirawo shanduko kumagadzirirwo ekutanga mushure mekumisikidzwa zero, iyo nyowani tebhu peji, yekushandisa menyu bar, pakati pevamwe. Iyo itsva tabu peji inotaridzika senge iri muOpera, imwe yeanonyanya kufarirwa maChromium-based browser.
Maitiro ekuyedza iyo nyowani dhizaini
MuFirefox 84, iyo yandinoshandisa nekumisikidza, hazviite kuyedza Proton, asi iri muhusiku vhezheni, parizvino Firefox 87. Naizvozvo, nhanho dzakakurudzirwa dzekutevera dzingave idzi:
Tinotora Firefox Nightly kubva Iyi link.
Unzip faira rakadzingwa.
Tinoenda kuFirefox dhairekitori ratakaburitsa uye tinya kaviri pa "firefox". Inowanzove iine mvumo yekuuraya asi, kana zvisiri, tinozvipa nekudzvanya chaiko uye tichitendera kubva pane zvingasarudzwa.
Pane imwe nguva muFirefox Husiku, tinoenda kukero bar uye tinyore pamusoro: config.
Isu tinotsvaga "proton" uye ichaonekwa browser.proton.enabled. Tinochichinja kuva "chokwadi".
Tevere, kana isu tichida zvakare kumisikidza iwo matabo uye hamburger, isu tinofanirwa kugadzira maviri maitiro. Kuti tiite izvi tinonyora zvinotevera zviviri, mune zvese zviitiko isu tinogadzira "bootlean" uye tinoona kuti kukosha kwacho "ichokwadi".
Pakupedzisira, tinotangazve Firefox.
Uye ndizvo chete. Kana pasina chakaitika, ndiwo uchave iwo marongero ayo Firefox 90 ichave nayo, iyo yekuvandudza inosvika muna Chivabvu, kana zvimwe chikamu chayo. Panguva ino, unogona ikozvino kurodha pasi Firefox 85 uye famba uchivanzika zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Proton, dhizaini nyowani inotangwa neMozilla muFirefox 90